These courses aim to help teenagers (14-17 years old) with discovery based learning approaches that will help them build confident and maturity they need in the 21st Century. Students will get not just English skills, but also other academic and social awareness skills they need for international colleges.
ဆယ်ကျော်သက်ကလေး (၁၃-၁၇နှစ်)များအတွက် တွေကို communicative english skills အပြင် ၂၁ရာစုရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာကျောင်းရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် စူစမ်းရှာဖွေရင်းသင်ယူရတဲနည်းများ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်သော skills များ သင်ကြားပေးပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်အောင်ရင့်ကျက်ခြင်း၊ တွေးခေါ်တတ်ခြင်းအပြင် ဗဟုသုတတွေလည်းကြွယ်ဝစေပါသည်။
These courses aim to help teenagers (13-17 years old) with discovery based learning approaches that will equip them with not just strong academic English skills but also with 21st Century's socioemotional/sociocultural skills that they need to succeed in international colleges.
ဆယ်ကျော်သက်ကလေး (၁၃-၁၇နှစ်)များအတွက် တွေကို communicative နှင့် Academic english skills အပြင် ၂၁ရာစုရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ နိုင်ငံတကာကျောင်းရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် စူစမ်းရှာဖွေရင်းသင်ယူရတဲနည်းများ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်သော skills များ အခက်အခဲများကြား ရင့်ကျင့်နိုင်သော skills များကို သင်ကြားပေးပါသည်။
UPPER-INTERMEDIATE I & II
Teen Level5(June 11- Aug 14/ Sat & Sun/ 4pm-6pm)
Teen Level4(June 11-Aug 14/ Sat & Sun/ 6:30pm-8:30pm)
Teen Level3(June 11-Aug 14/ Sat&Sun/ 6:30pm-8:30pm)
Teen Level2(June 11-Aug 14/ Sat & Sun/ 6:30pm-8:30pm)
Teen Level 1 (June 8-Aug 12/ Wed & Fri/ 4pm-6pm)
Teen Level7(May Intake)
Teen Level6(May Intake)
Teen Level5(May Intake)
Teen Level4(May Intake)
Teen Level3(May Intake)
Teen Level2(May Intake)
Teen Level 1 (May Intake)